बालकोटदेखि खुमलटारसम्म विप्लवले छेडेको बहस : संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनमत संग्रह ! | Ratopati
बालकोटदेखि खुमलटारसम्म विप्लवले छेडेको बहस : संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध जनमत संग्रह !
पूर्वमाओवादी नेता भन्छन्– व्यवस्था नै खराब भन्न मिल्दैन
काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारसँग तीनबुँदे सहमतिमार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुले पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेका छन् । सो समूहका नेताहरुले पछिल्लो एकसाताबीचमै विभिन्न पार्टीका करिव आधा दर्जन शीर्ष नेतासँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।
असार ३० बाट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटघाट सुरु गरेर यो अभियानको थालनी गरेका महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुले माओवादी क्रान्तिकारीका नेता मोहन वैद्यका साथै पूर्वमाओवादी नेता तथा हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि भेटिसकेका छन् ।
आखिर, विभिन्न दलका नेताकहाँ घरदैलोजस्तै गरी पुगिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र उनको पार्टीका नेताहरुको राजनीतिक एजेण्डा चाहिँ के होला ? के उद्देश्य लिएर उनीहरुले राजनीतिक भेटघाट तीव्र पारेका होलान् ?
सो तीनबुँदे सहमतिमा मुख्य विषय यी थिए :
व्यवस्था नै खराब हो भन्न मिल्दैन : मणि थापा
विप्लव लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट र छलफल गरेका पूर्वमन्त्री थापासँग हामीले विप्लव समूहको मागका सन्दर्भमा संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ थापासँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय विप्लव समूहका नेताले तपाई लगायतका पूर्वमाओवादी नेतालाई भेट्दै हिँडिरहेका छन् । के रहेछ उनीहरुको राजनीतिक एजेण्डा ?
तर, उहाँहरुले ‘संसदीय व्यवस्था कि समाजवाद ?’ भन्नेबारे जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्दै आइरहनुभएको छ नि ?
दोस्रो, अहिले डेमोक्रेटिकहरु र वामपन्थी सबैले संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेका छन् । अहिलेसम्म सबै पार्टीले समाजवाद भन्दै आएका छन् । तर, यो समाजवादचाहिँ कसरी आउँछ त ? यो समाजवाद अब संघर्ष गरेर आउँछ कि संसदभित्रबाट आउँछ ? अब हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? सबैको नीति समाजवाद नै हो भने अब समाजवादकै बारेमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने उहाँ (विप्लव) हरुको भनाइ देखिन्छ । नेपाली जनताले अब के चाहन्छन् ? नेपाली जनताले समाजवाद चाहन्छन् कि अहिलेकै संसदीय व्यवस्था चाहन्छन् ? यसलाई एउटा बहसमा लानुपर्यो र बहसमा लगिसकेपछि कानूनीरुपमा यसलाई कहाँबाट बैधानिकता दिने त भन्दा जनमत संग्रहबाट समाजवाद पास गर्यो भने त्यसमा सबैको स्वामित्व लिन सकिन्छ, नत्र हामी सबै कम्युनिस्टहरु पनि यही संसदीय व्यवस्थामा आउने, अरु पनि यसैमा आउने हुन्छ, तर यो संसदीय व्यवस्था नेपालमा फेल खायो भन्ने उहाँहरुको ‘पोजिसन’ देखिन्छ ।
यो उहाँहरुको परिकल्पना हो भनौं न । यसको पूर्णपाठमा विश्लेषण सुनेको छैन । संविधानमा समाजवाद लेखियो, यो किन लेखियो ? संसदीय व्यवस्थालाई नै हामीले संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था भनेका छौं, यो पनि नेपालमा एकदमै अस्थिरै भइराखेको छ । जनताको चाहनालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । उहाँहरुको त यो दलाल भयो भन्ने छ । यो संसदीय व्यवस्था पनि रहेन, दलाल व्यवस्थामा परिवर्तन भयो भन्ने छ उहाँहरुको । संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरु हैन कि दलालहरु नै आउने भए भन्ने उहाँहरुको विश्लेषण छ । तर, पूर्णपाठमा उहाँहरुको विश्लेषण त मैले पढेको छैन ।
तपाईको विचारमा अहिले हामीले यो संविधान र संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्ने दायित्व हो कि यसको विकल्प खोज्ने ? एमाले नेता महेश बस्नेतले विकल्प खोजौं भनिरहेका छन् । प्रभु साहले अर्कोतिरबाट संविधान पुनर्लेखन गर्नुुपर्छ भन्दैछन् । राजावादीले पनि यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेकै छन् । यहीबेला विप्लवहरुले पनि संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै जनमत संग्रहको कुरा गर्दा संविधान र लोकतन्त्र झनै कमजोर हुँदैन ? तपाईको विचारमा यो व्यवस्था नै खराब हो वा यसका सञ्चालकहरु मात्रै खराब हुन् ?
तर, पार्टीभित्र कसरी नेतृत्व बन्छ भन्ने प्रश्न चाहिँ उठेको छ । पार्टीभित्र नेता कसरी बन्छ र संसदबाट चुनिने प्रक्रिया के छ ? र, सरकार कसरी बन्छ भन्ने तेस्रो प्रश्न पनि छ । नेपालका नीति निर्माणहरु कसरी बन्छन् भन्ने चौथो प्रश्न छ । यी प्रश्नहरुमा चाहिँ अलिकति संशय छ भनौं न ।
नेताहरुले कति काम गर्न सक्छन्, नेताहरुको समय अवधि कति हो ? भन्ने पनि असीमित छ नियन्त्रण छैन । विधिमा पनि दोष छ । एउटा पार्टीको नेता कति बर्ष अध्यक्ष हुने हो ? प्रधानमन्त्री कतिपल्ट हुने हो ? कतिपटक समानुपातिक हुने या कतिपल्ट निर्वाचित हुने हो ? र, कतिवर्षसम्म उसले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ ? यसमा एउटा वायोलोजिकल अध्ययन पनि चाहिन्छ । कुन मानिसले कति बर्षसम्म राम्रो काम गर्न सक्छ त ? यी चिजहरु पनि छन्, जसको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण भएको छैन । वाइचान्स जो आयो, आयो भन्नेजस्तो तदर्थ देख्छु । यसले गर्दा संविधानका केही त्रुटि, मनस्थिति लगायतका कुरामा पुनर्विचारका लागि बहस जरुरी भएको जस्तो लाग्छ ।
ओली र विप्लवबीच सहकार्य कुन अर्थमा हुन सक्थ्यो ? अनि त्यो सहकार्य अहिले किन हुन सक्दैन ?